शब्दकोश: April 2010
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 30, 2010 8 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, April 27, 20103: Comments
भाँडाकुटी स्वाहा !! (भूमि, सबनम र तिनीहरूकी आमामा समर्पण )
धेरै नयाँ अनुहारसँग जम्काभेट हुन्छ यात्रामा । कोही हेराइमै पार हुन्छन्, (कसैलाई त देखे पनि नदेख्यै हुन्छ ।) कोहीसँग भने लामो सङ्गति चल्छ । कस्तो भने, यो उर्वरा समयमा जिन्दगीको सङ्घर्षमयी बतासमा हुत्तिँदा बरू घरपरिवारसँग हाम्रो दूरी छिप्पिन्छ, अन्य अनुहारले भने झन्-झन् निकटमा पार्दै लैजान्छ । मान्छे खल्तीमा अँट्दैन–टिक्दैन र मात्रै, नत्र यात्राको एउटा मोडको बिसाउनीमा हेर्दा आफूभरि मान्छेहरूको समुद्र भरिएको हुनेथ्यो होला । धन्न मान्छे बग्दै जाने भेल हो, छुट्दै जाने रेल हो !!
तर समय क स्तो छ भने, हावाको तहभन्दा पनि पातलो छुवाइ लिएर कोही आउँछ र उसै गरी हराउँछ झट्टै । मानौँ घर पछाडिकै करेसामा फलेको छ मुला, उखेल्यो, पुछपाछ पारेर खायो र सकिहाल्यो । जागिर नखाँदै अवकाशपत्र बुझे जस्तो ! यस्तो निकै हुन्छ दैनिकीमा । फास्टफुड कल्चरको प्रभाव यस्तै यस्तै होला । एउटा साथी थियो भीमेन्द्र, बिहेपछि पनि यसरी अहिले जस्तै नियमित उठबस हुन्छ भन्थ्यो ऊ । बेलुकीपखको बसाइमा हामी साहित्य, देश र भावी जीवनबारे विषयमा गम्भीर वार्ता गर्थ्यौँ । हाम्रो भेट ‘गफ’ मा कहिल्यै सीमित भएन । तर एउटा साउतीसम्म नगरी अरबी भूमिमा भासियो, जानुअघि ‘गएँ’ सम्म नभनी । बिहे गर्‍यो, भागी, भकुल्ले छोरो जन्मायो आफू जस्तै । तर बिहेअघिको मित्रता कायम गर्न सकेन ।
यो भर्खरैको ‘सकेन’ शब्द पनि कति उपयुक्त भयो होला, मित्रता टिकाइरहनु उसको सामर्थ्यअन्तर्गतको कुरा थियो कि टिक्नु समयको लेखा थियो !? आखिर छुट्यो सम्पर्कको पुल । कम्युटर कहिल्यै नचलाएको उसले अब कतै सोधखोज गरेर अनलाइन सम्बोधन गर्ला भनेर भर छैन । भाँडाकुटी खेल जस्तै ख्यालख्यालको पकाउने, चिउँडोमा गाँस पुर्‍याएर ‘चिउचिउ’ ओठ बजाएर खाए जस्तो गर्नुपर्ने बालापनको खेल सँगै स्वाहा भए झैँ लाग्छ कतिपय कुरा । साथीहरू नै औँलामा गन्न थाल्ने हो भने धेरै औँलालाई भाग पु्ग्दैन । कति जनालाई त कोटै पुर्‍याउनका लागि झैँ ‘साथी’ मानेर राख्‍नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । सोच्ने हो भने मलाम-यात्रा निकै सुनसान हुनेछ आजका मान्छेहरूको । कारण, आत्केन्द्रित हुने प्रचलन र तनावपूर्ण जीवनशैली निकै बढेको छ, कतिसम्म भने यान्त्रिकताको दौडाहा चेपमा भुनभुनाएर आफैँदेखि पनि एक्लिने अवस्थाको कामना गर्न मन लाग्छ आजका कतिपय हामीलाई । खरी झर्नुअघिको मादलको मधुर घिन्ताङको यादमा त्यस्तै सुरको चाहनामा खरी झरेको मादललाई अझै नमीठो झनझनाहटमा ठटाइरहेछौँ ।
कुनै तयारीमा थिइनँ यो लेख्‍नुपर्ला भनेर । र जीवनको सडक त यस्तै हो आखिर, बिनातयारी पनि पैयाँ गुडाउनुपर्ने ।
अब एउटा कथाजस्तो एक टुक्रा :
उसलाई निद्रा लागिरहेको थियो । घरकी आमा भएपछि मनसँगै दिमाग र शरीरको खटन बढी हुँदा ऊ नथाकोस् पनि किन ? त्यसमाथि उसको शरीरको भार पनि त अचाक्ली । मर्निङ वाकमा जाने गरेकी भए ज्यानले अलि हल्किने नाम लि्न्थ्यो होला । एकदिन गएकी पनि त हो । स्याँस्याँ फ्याँफ्याँ गर्दै १० मिनेट जति त कुदिछ पनि । तर उसको केही जोर चलेन । आफ्नै शरीरको बोसो बाटोबीच छेकबार बनेर उभिएको हिमपिण्ड साबित भयो उसको लागि । दगुर्न नसकेपछि एउटा फुच्चे केटोको साइकलमा बसेर घर फर्किछ । अब सकस सर्‍यो केटोमा । मरीतरी कन्दै पाइडल पेल्दै केटोले बडेमानको शरीर ‘ढुवानी’मा विजय प्राप्‍त गर्‍यो ।
त्यसपछिको भोलिपल्ट अब बच्चाहरूले मर्निङ वाक गर्ने बेलामा म बूढी माउले के कुद्‌नु लुखुरलूखुर भन्दै बाहिर निस्किन मन गरिन उसले । घर : एक संसार खसोखास लागू भएको थियो उसको जीवनमा । धुम्धुम्ती घरमा बस्नु उसको रुचिको कुरा । अरूहरू पेन्टिङ गर्ने, मान्छेहरू भेट्ने सोख राख्दै त्यो पूरा गर्न कहाँ-कहाँ पुग्छन् । उसलाई भने उही घरकै चौकुना रङ्गीन क्यानभास भएको छ । उसका बाक्ला गोडाहरू ब्रस हुन् उसोभए ?
जूनकीरीको पुच्छरभन्दा पनि मधुरो आवाजमा आमाले कोट्याई । निद्राले चुर उसका ओठ पनि चलमलाउन जाँगर मानिरहेका छैनन् । छोराछोरीको बा लाई पनि बा नै भन्ने रीत उसैले चलाएकी हो घरमा । छोराछोरी हाँस्छन् आमाले पनि आफ्नो बा लाई बा भन्ने सम्बोधनले बोलाएको सुनेर । तर त्यसरी बोलाउन पाउँदा उसको मनमा कति सन्तोक फैलिन्छ त्यो यी भुराभुरी के बुझ्लान्, फिस्स हाँस्छे । तर अहिले भने धेरै कुरा बुझे जस्तो बुद्ध झै गहिरो निद्रामा छन् दुवै बचेरा । सुतिरहेका छन् असरल्ल । भूमि र सबनम । जवानीमा खुबै सोचेर बूढा-बूढीले छोरा-छोरीको नाम निकालेका थिए । अब यिनले आफू जोईपोइको नाम बिर्सिनमा पो त्यो कसरत उमेरमा देखाउने हुन् कि भन्ने त्राही छ बूढा-बूढीलाई । इन्भर्टरको आडमा टेबल ल्याम्प बाल्ने हैसियतको थियो कि एक छेस्का मैनबत्तीमै रात कटाउनुपर्ने विवशताको थियो घरबूढो ! आँखा गाडिरहेको थियो कुनै किताबमा । केही केर्दै पनि थियो । बूढालाई चश्मा लगाउन मन नपर्ने, तर कमजोर आँखाले त्यही खोज्यो । एक माना तेल अँटाउने जस्तो गढेको आँखा । हावाको सानै भेलले हुत्याउने काँटको दाउरे ज्यानलाई कसरी पो भर गरेकी हो उसले ? आँधी आयो भने बूढोले आफूलाई अँड्याउन किलो ठोक्ने बन्दोबस्त गर्ला कि परिवारलाई नै पखेटाले छोप्ला ? सम्बन्ध पनि कसो-कसो गरी बाटिएर बस्छ !
“हुँ”, बल्ल उसको त्यो ‘बा’ को बोली फुट्यो । चार भित्तामा ठोक्किएर लत्र्याकलुत्रुक परे झैँ आवाज छिनमै सुस्तायो । छेउमा सुन्ने ऊ पनि त अब जागा थिइन । आजीवन साथसाथ जिउने भनेर सात फेरो मारेका यिनले सँगै सुत्‍ने र सँगै उठ्ने सामान्य दैनिकी पूरा गर्ने साइत पनि कहिल्यै जुरेन । चश्माको धारबाट नियाल्ने दु:ख पनि गरेन उसले माथि पलङमा । सधैँ यही हो रीत । एउटै छानाको ओत लागेर बसेका, तर गोलार्द्धका दुई छेउ जस्तो । मानौँ खेलिरहेका हुन् यिनले निरस भाँडाकुटी खेल । बूढा पकाउने बूढी खाने, बूढी पकाउने बूढा खाने । तर सँगै खाने तालमेल कहिल्यै नमिल्ने !
अन्तिममा एक टुक्रा:
जिउन पाउनुपर्छ जीवन भन्दै
जीवनको हरियाली भेट्न
जीवनकै अनमोल चउरमा
मडारिएर मैलिरह्यौँ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, April 22, 2010 1 : Comments
हत्केलाको भावर मैदानमा
आली झैँ उठेका
चमेरो झैँ झुन्डिरहने
श्रमको पिरो बाफ
इन्द्रेणीको बर्षादी ओढेको
गुफा खन्दै भुलभुलाएको बादल
छातीको बन्द बाकसमा
कसैले पट्याएर छाडे जस्तो
गुनासोको खात-खात स्टकोट
परेलीको छाता ओढेर
आकाशको गस्तीमा सपना पछ्याइरहने
के मात्र पो छैन,
राजमार्गमा मस्त फन्का मार्ने
कल्याङमल्याङ योजनाका ट्रकहरूमा
रुँदारुँदै निदाएको छ
एक चोक्टा आवाजमा मेट्न भोक
सडकमा दादा भइहिँडेकै हो
के पो छैन
हामीले हाँक्दै आएको रथमा
हाम्रो लगाम त हो नभएको !
लगाम खिच्न बाँकी रहँदै -
यी लहरे नसा ... ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, April 19, 20106: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, April 13, 20103: Comments
प्रेमको बारेमा धेरै कविता लेखिएको छ संसारमा । देशको बारेमा जति नै । देशको कविता पनि त त्यसो त प्रेमकै कविता हो । तर आपसी मानवीय प्रेमको कविता लेख्‍दा भने कसो-कसो सत्यले हरफहरूमा चिहाए जस्तो भान हुन्छ मलाई, कविता लेखिरहँदा । र चाहेर पनि तिनलाई अलग्याउन सकिन्न, ती भावले कवितामै गुँड बनाउँछन् । प्रेम नगरिँदो हो त प्रेम कविता पनि लेखिन्नथ्यो कि !? चराहरू पाठशाला जाँदैनन्, कलम च्यापेर हिँड्दैनन्, चखेवाहरू भ्यालेन्टाइन डे मा रातो गुलाब बगलीमा बोकेर डेट पार्क जाँदैनन् । र पनि चुच्चाहरूको आडमा तिनैले लेख्‍छन् प्रेमको युगल कविता । र हामी चाहिँ हरफहरूको सुकुल बिछ्‌याएर कविताको चर्खा घुमाउँछौँ । शब्दजालको जटा । कहिलेकाहीँ लाग्छ, मान्छेले काम नगर्ने कुरै मात्र बेसी गर्ने विशेषता प्रेमको विषयमा पनि चरितार्थ भइरहेको छ कि ? अर्थात् जति प्रेमको बारेमा चर्चा गर्छौ, उति प्रेम गर्दैनौँ कि ? जति लेखिनुपर्ने हो प्रेम-कविता, लेखिएको छैन कि ? त्यसैले आवश्यक छ : जति गर्छौँ प्रेम, उति प्रेमको आलाप तानौँ ।
यहाँ, प्रेमकै एउटा कविता आस्वादन गरौँ :
२२औँ शताब्दीको प्रेम
हावाले पनि नबिटुलिई
तिनै आँखाभरि चोबलिन आउने रहरसँगै
म पाल्नेछु -
दुइटा जिन्दगी एउटै धारमा अर्जाप्ने रहर
बाफिएर आफ्नै पग्लिँदो चट्टानमा
झन् अमिलिँदै हुँदो हो,
सहरको घण्टाघर पनि त
आफू अँडिन भने थाक्दो हो
आफ्नो सग्लो मन भजाउँदै हिँडिरहेको म
संग्रहालयमा शोभायमान मुटु नामको यन्त्र
खोइ कुन सुरक्षाको यात्रामा
आफैँदेखि भाग्दो हुँ !
घामले रेती लगाउन नसकेको भुत्ते दिनमा
हिँ ड् दा हिँ ड् दै
कुनै अत्याधुनिक छापाखानाको छेउछाउ
रद्द भएर काटिनेछु म मेरै मायालुको कम्पोजमा
र छुट्नेछु बाइन्डिङविहीन
असरल्ल पानाहरू जस्तै
हावाको सानै हर्कतमा धकेलिँदै
अनिश्‍चित खर्कको चरनतिर
मेरा रहरका बिजोर बस्तुभाउ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, April 12, 2010 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 10, 20102: Comments
साथीबाट सापट पाएको किताब अक्सर भारी हुने गर्छ मलाई । पढ्नुपर्ने किताबको खात घरमै चिसिएर बसेका हुन्छन्, अरूको किताब ल्याएर कहिले पढिसक्नु कहिले बुझाउनु, त्यसै-त्यसै धैर्य टिक्दैन र सरसापटको व्यवहारै गर्दिनँ ।
तर यसपालि नलिन चाहँदा-चाहँदै पनि एउटा किताब हातमै मडारिन आयो । ‘100 LYRICS’ ! नाइँ भन्नै आएन । कारण थियो- किताबको नाममा अनौठो आकर्षण बोकेर बसेका भारतीय गीतकार, कवि गुलजारको परिचय जोडिनु । फिल्मको गीतमा यदाकदा उनको नाम गाँसिएर आउँदा एक किसिमको महक अनुभूति हुन्थ्यो । र फेरि छिनमै अर्को सन्दर्भ आउँदा त्यो प्रसङ्ग दिमागी पत्रमा कता पुरिन्थ्यो । एक सास फेराइमा उच्चरित हुने, एक शब्दको नाम । निकै सजिलो-रसिलो लाग्ने नामै पनि । आफैँमा अनुपम गीत जस्तो ! यस्ता ‘गुलजार साब’ का एक सयवटा गीति रचनाहरू एउटै किताबभित्र समेटिएको पाउँदा पढ्न लालायित किन नहोऊँ म ? पानाहरूमा आँखा छर्दै अघि बढे, आँखासँगै मन पनि गाडिँदै गएको अनुभूतिमा रम्न थालेँ ।
जति-जति पाना पल्टिँदै गयो, चिरपरिचित गीतहरूको वाणीले मनको पर्दा हल्लाउँदै गयो । ए, यो त गुलजारले लेखेका रहेछन् भनेर पुरानो बेलामा सुनेर यादको चोकेमा अड्किएका भाकाहरू अझ आदरको खुड्किलोमा चढ्दै गयो ।
“नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे …"
सांसारिक शाश्‍वत पाटोलाई सरल गीति स्वरूपमा ढालेर कुनै आहानमा स्थापित गरे झैँ लाग्छ सङ्ग्रहभित्रका कतिपय गीतहरू । र नेपाली चलचित्रका प्राय: गीतमा नभेटिने कुरा (खोज्नु पनि कहिले त मूर्खतै लाग्छ) : ती गीतमा काव्यिकताको गहना, साहित्यिकताको उँचाइ भरपूर देखिन्छ, बुझिने कोटिमा । यसैले सायद गुलजारहरू गुलजार छन् जनमानसमा । सुनिरहेको गीत शब्दमा गेडा केलाई पढ्दा त्यसको अर्थमा गहिराइ भेटिँदो रहेछ, भाव न्यायमा जाग्दो रहेछ । चञ्चले बान्कीमा घन्किने ‘कजरा रे’ गीत ‘पढेपछि’ त्यस्तै लाग्यो । सुन्दा बाजा र लयको सुर लाग्थ्यो, पढ्दा हरियाली अझ घना भयो ।
“ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर
हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर … "
(बन्टी और बब्ली, २००५)
सन् ६० को दशकदेखिका (गुलजारले ‘बंदिनी’ फिल्म, १९६३ बाट चलचित्रको गीत लेखनमा डेब्यु गरेका रहेछन्) गीतहरूलाई सँगालिएको किताबमा विशेष गीतहरू रच्दा/रेकर्ड गर्दाका तत्कालीन प्रसङ्ग, घटनावस्तु र अविस्मरणीय पलसहित प्रस्तुत गरिएको । ती अतिरिक्त पानाले किताबलाई अझ खँदिलो सुरुचिकर बनाएको छ । ‘कजरा रे’ बोलको गीतकै कुरा गरौँ, जसमा फिल्मभित्र नायिका ऐश्वर्या राय अतिथि कलाकारको रूपमा नाचेको सन्दर्भमा गुलजार सङगीतकार शङ्कर महादेवनलाई सम्बोधन गर्दै खुसी साट्छन्, “ तिमी मान नमान, यो गीत शत प्रतिशत ऐश्वर्याको कारण हिट भएको हो ।” ‘बीती न बिताई रैना/बिरहा की जाई रैना’ (परिचय, १९७२) गीत निर्माता जितेन्द्रले मन नपराइरहेको बेला अमिताभ बच्चनले सोही गीत सुनेर आँखाभरि आँसु पिलपिल पारेको प्रसङ्ग पनि गुलजारले अर्को ठाउँ राखेका छन् ।
अभिव्यक्तिमा नयाँपनको खोजी गर्नेहरूले गुलजारको हरफहरूमा फैलिँदा निराश हुनुपर्दैन । उनको आगमन साहित्यिक वृत्तबाट भएकोले हुनुपर्छ, फिल्मको खास कथानक, विषयवस्तु र बाँधिएको परिधिमा रहेर लेखे पनि तिनमा प्रशस्त काव्यको गुदी भरेका छन् ।
“इस दिल में बसकर देखो तो
ये शहर बड़ा पुराना है …" (माया मेम साहब, १९९३)
“रोज अकेली आए
रोज अकेली जाए
चांद कटोरा लिए भिखारन रात …” (मेरे अपने, १९७१)
‘छैंया छैंया‘ (दिल से, १९९८) भनेर एक जमानामा बजार पिट्ने
“जिनके सर हो इश्क की छांव
पांव के नीचे जन्नत होगी …"
२७५ पृष्ठको किताबमा १०० गीति भाकामा मानवीय भावनाकै उहापोह प्राथमिक रूपमा उठेको छ । जसलाई एउटा संवेदनामयी लेखकको हार्दिकतासँग जोडेर हर्न सकिन्छ । हार्डकभरको किताबको ४९९ भारु खर्चन कसलाई कतिको सहज-असहज हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ । तर पढ्न थालेपछि किताबमा खडेरी देखापर्दैन । रसले नुहाएरै निस्किन पाइन्छ । ‘तुझसे नाराज नहीं जिंदगी’, ‘मुसाफिर हूं यारो’, ‘हमने देखी है उन आंखो की’ लगायतका परिचित हरफमा डुब्दा मादकता शिर उठाएर लरबराउन सक्छ ।
जस्तो कि,यही किताबमा टोलाइरहँदा हत्तपत्त कहिले गीत नलेख्‍ने म गीत लेख्‍नमा जुर्मुराएँ । चलनचल्तीको मिटरवाला गीत होइन हो । थाहा छैन, सङ्गीतकारलाई पनि धुन रचना गर्ने बेला केही छिन भाउन्न हुँदो हो कि ?
पुछारमा त्यही आफ्नै गीत पस्किन्छु :
लेखेका थियौँ कि पानीमा नाम
सहरको किनारामा छुटेको रेल
कक्षामा मानौँ कोही भो गयल
अब त यही सुनसान साथी भएछ
बोल्ने चाह पनि कोही हुन्जेल रहेछ ।
लेखेका थियौँ .. ..
सास फेर्ने हावा कहाँ आड लाग्ने भित्ता कहाँ
अब उठ्छु भन्दै थिएँ आफ्नै जोर खुट्टा कहाँ
बाटो त भुइँचालो न हो कतिखेर फाटिगयो
भुल्छु भन्नेको आँखा मोती जस्तै छाइरह्‌यो ।
(धन्यवाद गुलजारलाई मसम्मन् ल्याइदिने साथी समृद्धि सायदमा ।)
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, April 06, 20104: Comments
Labels: गीत, पुस्तक
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 03, 20103: Comments
आँखामा पर्दा हुन्छन् यी आँसु
सपनाका बाटा थुन्छन् यी आँसु ।
कति गोता खाएछन् यिनैले,
कहिले त आफैँ रुन्छन् यी आँसु ।
ओ ईश्वर थपे हुन्छ मार,
हामीलाई त सुन्छन् यी आँसु ।
मुस्कानको पन्ना-पन्ना भिजाउन,
चिसो मफलर बुन्छन् यी आँसु ।
सबैले हात पन्छाए के भो,
अँगालोभरि छुन्छन् यी आँसु ।
कहिले त जिन्दगीको गोडामा बत्ती निभ्दोरै'छ र सर्वत्र चकमन्न अन्धकार देखिँदोरै'छ । अन्धकार खासमा देखिने कुनै वस्तु त होइन, छाउने दृश्यावली हो क्यार ।
गोडाको बत्ती निभेर अँध्यारो नमडारिए पनि यदाकदा टोलाउँदोरै'छ जिन्दगीको टुहुरो शिर । टोलाउनलाई जहाँतहीँ त ठेगाना हुन्छ नि ! कुनै निश्चित स्टेशनको खाँचो नै कहाँ हुन्छ र ? तिमी जो हौ, तिमीलाई पनि टोलाउन मन हुँदो हो । तिमी मेरो काँधमा शिर बिसाउँदै टोलाउन सक्थ्यौ, तर पर्ख ! म तिमीसँग छुइनँ । यतिखेर त तिमीसँग भेट्ने हतार हामीबीच छ । यो हतार मैले पट्याएर खल्तीमा राखेको छु । त्यसैले त खल्तीमुनिको धड्कन यति रफ्तारमा छ सायद !
भृकुटीमण्डपको पार्क भन्न नसुहाउँदो पार्कमा म कुनै रुखको अडेसामा सुस्त बन्दै टोलाएको हुन्छु । छेउमा मधेसी मूलका दुई आमाहरु कहाँकहाँबाट प्लास्टिकमा गुटमुट्याएर ल्याएको भात तरकारी कचौरामा पकापक खन्याएर बच्चाहरुलाई खुवाउँदैछन् आफू खाँदैछन् । ( मधेसका हुन् वा अमेरिकाका, आमाहरु त आमा नै हुन् । फरक यति हो, अमेरिकाका आमाका स्तनहरु सर्जरीबाट यथावत् पुष्ट होलान्, अनेक धाइधपेडी तनाव र कुपोषणले यी मधेसका आमाहरुको स्तन झोल्लिएको छ ।)
अलि पर तीन चार जना अधबैसेहरु पासपोर्ट र टिकटको कुरामा भुनभुनाइरहेछन् । सायद विदेशतिर झिङ्गालाई झैँ उडाउने तर्खर होला आफ्ना भाइ-भतिजालाई । मान्छे अचेल झिङ्गासमान त भएको छ - एक झमटमा भान्साबाट उड्यो, एक झमटमा रछ्यानमा !
यो पार्कमा पार्क भनेर कतै केही सूचना संरचना तोकिएको छैन । वरिपरि तारबारहरु छन् च्यातिएर तार गोटागाटी छरिएका छन् भुइँमा त्यसैले बार पनि छैन । केही बेरमा दुई नवयौवनाहरु आउँछन् बस्छन् चौरमा । चिसो कुल्फीसँगै गफमा हुलुलुलु पग्लिन्छन् । घाम तातै छ तालमाथि । तर घामभन्दा तातो लाग्छ मलाई यिनको हल्ला ।
म निस्किन्छु ।
निस्किनुअघि तिनै मधेसी मूलका आमाहरुको बगलमै बसेर मैले लेखेको गजल माथि पढ्यौ होला तिमीले ।
हस्, अब हामी छुटौँ ! फेरि भेट्न पनि त छुट्नु जरुरी रै'छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 02, 20104: Comments
Labels: अनुभूति, गजल, समाज